Mid kamid ah ilaaladiisa oo ku dhaawacmay qarax magaalada Boosaaso lagula beegsaday wasiirkii hore ee qorshaynta Puntland - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandMid kamid ah ilaaladiisa oo ku dhaawacmay qarax magaalada Boosaaso lagula beegsaday wasiirkii hore ee qorshaynta Puntland
August 4, 2019 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Puntland Shire Xaaji Faarax. [Sawir Hore]
Boosaaso-(Puntland Mirror) Miinada wadada lagu aaso ayaa lala beegsaday gaariga wasiirkii hore ee qorshaynta Puntland Shire Xaaji Faarax gudaha magaalo xeebeedka Boosaaso maanta oo Axad ah.
Shire Xaaji oo gaariga la socday ayaan wax dhibaato ah ka soo gaarin weerarkaas, balse mid kamid ah ilaaladiisa ayaa ku dhawaacmay qaraxa, sida ilo-wareedyo katirsan haayadaha ammaanka ay u sheegeen bog wareedka Puntland Mirror.
Maleeshiyada ISIS ayaa sheegatay masuuliyada weerarkaas, sida ay ku warantay wakaalada waraka Amaq oo taageerta kooxdaas.
Boosaaso oo ah xarunta ganacsiga Puntland ayaa bilihii dhawaa ee la soo dhaafay waxaa soo hagaagayay nabadgalyadeeda kadib markii dowladda ay halkaas geysay ciidamo badan si ay uga qeyb qaataan howlgalada lagu sifeynayo ururada argagixisada ah.
Bujumbura -(Puntland Mirror) Madaxweynaha dalka Burundi ayaa Jimcadii shalay ku hanjabay in uu la baxayo dhammaan ciidamadiisa oo gaaraya 5,500 askari oo uu ugu deeqay Howlgalka Midowga Afrika ee gudaha Soomaaliya, isaga oo sheegay in [...]